I-Samsung Galaxy Note 10 Pro iya kufikelela kwi-4.500 mAh | I-Androidsis
Ibhetri ibisoloko yenye yeenkampani ezisebenza ngobuchwephesha andikasifumani isisombululo esisebenzayo okwangoku eqhubeka nokubanyanzela ukuba bandise amandla abo ukuze bakwazi ukubonelela ngokuzimela okufanelekileyo, ukongeza ekuphumezeni ukuphuculwa kwenkqubo yokusebenza (ejongene noGoogle) kunye nokwenza iiprosesa ezifanelekileyo (iQualcomm kwiimeko ezininzi).
Ubutsha beGPS S10 bubungqina boku, kunye namandla ebhetri kwiinguqulelo zayo ezintathu, ngaphezulu koko sinokukufumana kwi-Galaxy S9 kunye ne-S9 +. Indawo yokugqibela ephezulu eza kuphehlelelwa yinkampani, i-Galaxy Note 10 iya kubona ubungakanani bebhetri yayo inyukile, ngakumbi imodeli yePro iya kwenza njalo ukuya kuthi ga kwi-4.500 mAh, ke i-4.000 mAh ye-Galaxy Qaphela 9.
Ewe, sithetha ngeGalaxy Note 10 Pro. Kuyabonakala ukuba inkampani yaseKorea icwangcisa yazisa ezine ezahlukeneyo zeGlass Qaphela 10. Ezimbini ziya kulawulwa yimodem ye4G kunye nezinye ezimbini ngemodem ye5G. Ababini kubo banokufika kwimarike ngescreen se-6,28-intshi, ngelixa uguqulelo lwePro luya kwenza njalo ngescreen se-intshi ye-6,75. Ubungakanani bekrini buya kuhambelana nemodeli yePro.
Kucacile ukuba i-Samsung ufuna ukuba uluhlu lweNqaku lufikelele kwinani elikhulu labathengi abanokubakho, njengoluhlu lwe-S10, yiyo loo nto ukumiselwa kwemodeli ye-S10e, kubiza ixabiso eliphantsi kodwa ngokufana neempawu ezifanayo esinokuzifumana kwezinye iiterminal ezimbini eziyinxalenye yoluhlu lwe-S10.
Ubungakanani bebhetri yeGlass Note 10 Pro iye yavuza emva kwesi sixhobo iqinisekisiwe liZiko laseTekhnoloji laseMzantsi Korea, kwaye ikwabonisa ukuba inombolo yemodeli iya kuba njani i-EB-BN975ABU ehambelana nohlobo lwe4G I-SM-N975.
Uyilo lweSamsung yeNqaku le10
Uluhlu lweGPS S10 lukhuphe uyilo olutsha apho umphambili wonke usisikrini, kwaye apho sinokufumana khona iikhamera zangaphambili enye okanye ezimbini ezimile kwisiqithi. Ngokuqinisekileyo oku kuya kuba njalo Uyilo olufanayo oluya kuphunyezwa yiSamsung kwisizukulwana esitsha Qaphela iNqaku 10, Isizukulwana esitsha esiza kuboniswa phantse ngo-Agasti kwaye siya kufikelela kwintengiso ekuqaleni kukaSeptemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Samsung Galaxy Note 10 Pro iya kufikelela kwi-4.500 mAh
[APK] Ungayikhuphela njani i-ES File Explorer Pro (ayifumaneki kwiVenkile yokudlala)